Howgallo lagu soo qab qabtay hub iyo maleeshiyaad oo laga fuliyay Muqdisho+ SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Howgallo lagu soo qab qabtay hub iyo maleeshiyaad oo laga fuliyay Muqdisho+ SAWIRO
Ciidamada nabad-sugida Dowlada Soomaaliya ayaa maanta howlgal gunaanad u ahaa wajiga koowaad howlgal guri guri loo baarayay degmooyinka Gobolka Benaadir ka fuliyay xaafadaha degmooyinka Hodan,Howlwadaag Warta Nabadda, Yaaqshiid iyo Heliwaa, kuwaasi oo guri guri baaritaanno looga sameeyay.
Waxaana howlgalkaan Ciidamada ay ku soo qab qabteen hub, waxyaabaha maanka dooriya iyo dad lala xiriirinayo Ururka Al-Shabaab.
Xaafadaha Degmada Hodan ayaa howlgalkii laga fuliyay waxaa lagu soo qabtay waxyaabaha maandooriya, sida qamriga la mac-malay ee loo yaqaan Calaqa, xashiis iyo dadkii ka ganacsanayay, waxaana dhismayaashii lagu gadayay waxyaabaha maanka dooriyay la wareegay ciidamada hay’adda Nabad sugidda ah.
Guddoomiyaha Warta Nabadda Yaasiin Nuur Ciise oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in howlgalkaasi uu yahay mid lagu doonayo sidii xaafadaha degmooyinkaasi looga saari lahaa maleeshiyaadka ku dhuumaaleysanaya.
Xarunta hay’adda Nabad sugidda Gobolka Benaadir ayaa lagu soo bandhigay rag lala xiriirinayo Shabaab iyo sodon qori oo laga kala keenay xaafadihii maalmihii ugu dambeysay howgallada laga sameynayay.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka Maxamed Yuusuf Cismaan oo la hadlay saxaafadda ayaa yiri “Howlgalladii ugu dambeyay waxaa lagu soo qabtay 82 qof, baaritaanno dheer kaddib waxaa la ogaaday in 22 ka mid ah ay noqdeen horjoogayaal la yaqaano oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaa sidoo kale lala wareegay labo garaash oo lagu diyaarinayay walxaha qarxa iyo shan gaadiid oo ay isticmaalayeen maleeshiyaadka magaalada fowdada mararka qaar ka geysanayay”.
Ujeedka laga leeyahaya howlgaladaan ayaa Saraakiisha amaanka waxay ku sheegeen in amaanka caasimada lagu adkeynayo.
One thought on “Howgallo lagu soo qab qabtay hub iyo maleeshiyaad oo laga fuliyay Muqdisho+ SAWIRO”
Abdikadir Yusuf says:
06/11/2014 at 05:50
Waa wax fiican laakiin walaaloow qadkaaga waa culus yahay ee fududeey pls dadka dibada jooga way ku dhib qabaan laakiin wararkaaga waa Top bro by gaaloos